हाच्छिउं गर्ने बित्तिकै किन लिइन्छ भागवनको नाम ? – Janacharcha.com
» समाचार अंक: 1118
हाच्छिउं गर्ने बित्तिकै किन लिइन्छ भागवनको नाम ?
Janacharcha.com बिहिबार, आश्विन ०९, २०७६ मा प्रकाशित
विराटनगर, असोज ०९
मानिसहरुले प्राय हाच्छिउं गरेपश्च्यत भगवानको नाम लिने गरेको, तपाईले विचार गर्नु नै भएको होला । श्रीमन नायारण, राधे राधे, जय श्री श्याम आफ्नो आस्था अनुसार मानिसहरुले हाच्छिउं गरेपश्च्यात भागवानको नाम लिने गरेका छन् । मुस्लिमहरुले अल्हम्दुइल्लाह (अल्हाको प्रशंसा, धन्यवाद) भन्ने गर्दछन् र क्रिशचनहरुले जिसस भन्ने गर्दछन् ।
यी विभिन्न धर्ममा गरिएको सम्बोधनको अर्थ भागवानलाई धन्यवाद भन्ने लाग्दछ । यी बाहेक अन्य धर्महरुमा पनि हाच्छिउं पश्च्यात देउतालाई धन्यवाद दिने गरेको पाईन्छ । र हाच्छिउं सुन्नेहरुले समेत आफ्नो धर्म संस्कृति र भाषामा हाच्छिउं गर्नेलाई भाग्वान्ले तिम्रो रक्षा गरुन् भन्ने गर्दछन् ।
तर हाच्यु गरेपछि भागवानको नाम लिनुको कारण के हो ? किन भागवन्लाई धन्यवाद भनिएको हो ? उच्चारण गर्नेलाई समेत सायदै थाहा होला ।
यस विषयमा अनुसान्धान गर्दै गएपछि केहि तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । मानिन्छ, हाच्छिउं गर्ने क्रममा केहि सकेण्डका लागी मुटुको ढुकढुकी बन्द हुने गर्दछ । मुटुको ढुकढुकी बन्द हुनु भनेको मृत्यु हुनु सरह हो । मुटु बन्द भएर पुनःसंचालनमा आएपछि, मानिसहरुले भागवानको नाम उच्चारण गरी धन्यवाद दिने गरेका छन् ।
अर्को तर्फ भने, डाक्टरहरुले हाच्छिउं गर्ने क्रममा धड्कन बन्द हुने कुरा सत्य नभएको बताएका छन् । डा. सुजता रेडिका अनुसार हाच्छिउं गर्ने क्रममा धड्कन बन्द नहुने तर मुटुमा हुने रक्तसंचार भने, त्यसक्षण घट्न सक्ने बताउछिन् । उनी भन्छिन् “नाकमा केहि चिजले असजिलो बनाएपछि त्यसचिजलाई हटाउन शरिरले आटोमेटिक हावाको प्रेसर निकाल्छ, जसलाई हाच्यु भनिन्छ । त्यस क्रममा मुटु बन्द हुदैन तर हावाको प्रेसरका कारण मुटुमा हुने ब्लड सर्कुलेशन भने स्लो हुन सक्छ ”
कथन अनुसार मुटु नै पुरै बन्द नहुने भएतापनि, हाच्युको क्रममा मुटुमा केहि असजिलो (मुटुमा ब्लड सर्कुलेशन स्लो हुनु) पैदा हुने कुरा चिकित्सकको भनाईले समेत पुष्टी गर्दछ । मुटुमा असजिलो पैदा भए मुटु बन्द हुनुसक्ने संभावना भने रहदछ ।